China Fish Pattern RPET 100% Recycled Material Chest Bag Sport Style Running Bag Portable Cool Fashion Messenger bag for unisex factory and suppliers | Changlin
Iyak Nlereanya RPET 100% Recycled Ihe Igbe Igbe Style Na-agba ọsọ akpa Portable Cool Ejiji ozi akpa maka unisex
Ọ bụghị ihe dị mfe iji mee mmiri, na mgbakwunye, ọ bara ezigbo uru na ndụ kwa ụbọchị na ejiji maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Mbipụta akwụkwọ mere ka akpa nwee ike ịnwe ọkụ ma mara mma.
Nha: 19L * 11W * 37Hcm Mmechi: zipa
Advantage: Obere, Ejiji, arụ ọrụ, ebibi
Guzosie ike na 2017, Changlin bụ alaka ụlọ ọrụ nke Jiafeng Plastic Products CO., LTD nke nwere ihe karịrị afọ 20 ahụmahụ nke akpa na-eme ka akpa a bụ RPET 100% nke emere maka mmeghari ihe na-adighi mfe ị nweta mmiri.Besides, ọ bara ezigbo uru na ndụ kwa ụbọchị na ejiji n'ihi na ndị ikom na ndị nwaanyị.Fish ebi akwụkwọ mere akpa ọzọ na;
Rkpụrụ RPET a bụ ụkpụrụ azụ nke dị nro dịka oke osimiri.
Styledị ụdị azụ na-eme ka a mara mma.
Dị ka ikike, O zuru ezu maka ndị mmadụ mgbe ị na-agba ọsọ na ịzụ ahịa. Nha ya bụ 19L * 11W * 37Hcm nke nwere ike itinye ekwentị gị, ala mmiri, anụ ahụ, wdg.
Ugboro abụọ na-adọkpụ dị mfe maka ndị nwere àgwà dị iche.
Ihe omuma a na egosi gi na agba di obere ochichiri na ucha azu bu ezigbo acha anụnụ anụnụ.
Nke gara aga: Ozuzo RPET 100% recycled ihe Igbe Igbe akpa Style agba agba akpa Portable Cool Ejiji ozi akpa maka unisex
Osote: RPET canvas Bag Custom Makeup Travel Toiletry Eco-friendly Natural Cosmetic Bag For Women and Men
Natural okwuchi gburugburu udi akpa ịchọ mma nkwakọ ...
RPET na zuru ebi akwụkwọ ịchọ mma mbukota akpa FL ...
Recycled Cotton akpa maka ntecha ịzụ ahịa func ...